युएन मिसन छनाैट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक ! – KhabarTime
०७८ असोज ०२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारकाे भाग्यफल!
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जानका लागी लिईने छनाैट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशंका गरिएको छ । शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीले लिने आन्तरिक परीक्षा ‘प्रि–स्याट’ को प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशङ्का गरिएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र ७ वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले साउन १६ मा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षामा २ हजार ४ सय परीक्षार्थी सहभागी थिए । जसमा जवानदेखी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मका थिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको युएन शाखाले परीक्षाको संयोजन गरेको थियो । प्रश्नपत्र बाहिरिएको हल्ला चलेपछि तुरुन्तै अर्को प्रश्नपत्र तयार पारिएको थियो । जसका कारण डेढ घण्टा ढिलो जाँच लिइएको प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरले बताए । उनका अनुसार प्रश्नपत्र बाहिरीएको आशङ्कामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसबारे छानबिन सुरु गरेको छ ।